एक वर्ष कार्यावधि पुगेका प्रहरी प्रमुखमा फेरबदल , को कहाँ सरुवा भए ? – Kanika Khabar
एक वर्ष कार्यावधि पुगेका प्रहरी प्रमुखमा फेरबदल , को कहाँ सरुवा भए ?
Kanika Khabar २ असार २०७७, मंगलवार ०८:१० June 22, 2020 मा प्रकाशित
असार २ दाङ ।
एक वर्ष कार्यावधि पुगेका प्रहरी प्रमुखमा फेरबदल भएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले १६ वटा जिल्लाको प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) को सरुवा गरेको छ ।